အမူအကျင့်ကုသမှုစဉ်အတွင်းမက်သာဖီတမင်းသုံးစွဲသူများအတွက် Striatal Dopamine D2 / D3 လက်ခံသူများအပေါ်လေ့ကျင့်ခန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်သည်။
comments: လေ့ကျင့်ခန်း၏ 8 ရက်သတ္တပတ်သိသိသာသာကုသမှုခံယူ meth စွဲအတွက် D2 receptors တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုအောက်ပါထောက်ခံပါတယ်:
လေ့ကျင့်ခန်းပင် meth စွဲအတွက် desensitization reverse ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်သောကျောက်သတ်မှတ်ကြသည်မဟုတ်: ပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စရပ်များ။
Meth ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် D2 receptors ကိုကျဆင်းစေနိုင်သည်။ #2လိုပဲဒီဟာကမင်းဟာမင်းကိုစွဲလမ်းသူအဖြစ်မွေးဖွားလာသူဖြစ်တယ်။
Neuropsychopharmacology ။ 2015 အောက်တိုဘာ 27 ။ Doi: 10.1038 / npp.2015.331 ။
Robertson က CL1,2, Ishibashi K သည်2,3, Chudzynski J3, Mooney LJ3, Rawson RA3, Dolezal BA4, Cooper က CB4, ညိုသော AK1,2, Mandelkern MA2, လန်ဒန် ED1,2,3.
စိတ်ကြွဆေးအသုံးပြုမှု Disorder အရေးပါသောကုထုံးပစ်မှတ်အဖြစ်ဤအလိုငွေပြမှုဖော်ထုတ်ဆင်းရဲသောကုသမှုရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြရသော striatal dopaminergic လိုငွေပြမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းကြွက်ဦးနှောက်အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် neurochemical ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု attenuates နှင့်ပဏာမလေ့လာရေးလေ့ကျင့်ခန်း striatal D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (Non-Displacement စည်းနှောင်အလားအလာအဖြစ်တိုင်းတာ, ကို BP တိုးပွါးကြောင်းအကြံပြုNDပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်။
ဤလေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲခြင်းရောဂါတစ်ခုအတွင်းလူနာအမူအကျင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု-လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်း striatal D2 / D3 receptors အတွက်လိုငွေပြမှုနောက်ကြောင်းပြန်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ သင်တန်းသားများကိုစိတ်ကြွဆေးမှီခိုဘို့ DSM-IV စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့အလွဲသုံးစားမှုတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကနေ abstinence ထိန်းသိမ်းထားနှင့်၎င်းတို့၏စွဲအဘို့အမူအကျင့်ကုထုံးကိုလက်ခံရရှိဘယ်မှာလူနေအိမ်အဆောက်အအတွက်စာရင်းသွင်းခံခဲ့ရသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးခဲ့ကြသည်။
သူတို့ဟာ 1 ရက်သတ္တပတ်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ရေး (ဎ = 10) ကြီးကြပ် 9-နာရီကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်တန်းတူအချိန်ကျန်းမာရေးပညာရေးလေ့ကျင့်ရေးကိုလက်ခံရရှိကြောင်းတဦးတည်း (ဎ = 3), 8 ရက် / ရက်သတ္တပတ်မှ randomized ခဲ့ကြသည်.
သူတို့ဟာသုံးပြီး positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) အတွက်တစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနစင်တာဆီသို့ရောက် လာ. , 18striatal D8 / D2 အဲဒီ receptor ကို BP အပေါ် 3-ရက်သတ္တပတ်ကြားဝင်များ၏သက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်သည့် F-fallyprideND.
အခြေခံမှာ striatal D2 / D3 ကို BPND အုပ်စုများအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ သို့သော် 8-ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, လေ့ကျင့်ခန်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သူ striatal D2 / D3 ကို BP အတွက်သိသိသာသာတိုးပြသNDအဆိုပါပညာရေးအုပ်စုသူများမနေစဉ်။ D2 / D3 ကို BP မအပြောင်းအလဲများရှိခဲ့သည်ND အုပ်စုတစ်စုဖြစ်စေများတွင် extrastriatal ဒေသများတွင်။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်စနစ်တကျလေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ရေးစိတ်ကြွဆေးအသုံးပြုသူများသည်အတွက် striatal D2 / D3 အဲဒီ receptor လိုငွေပြမှု ameliorate နိုင်သည်ကိုအကြံပြုနှင့်ရမ်းလှုံ့ဆော် dependence.Neuropsychopharmacology တစ်ခုတွဲဖက်ကုသမှုအဖြစ်ထပ်မံအကဲဖြတ်အွန်လိုင်းဆောင်းပါး preview ကိုလက်ခံခဲ့သည်, 27 အောက်တိုဘာလ 2015 ။ Doi: 10.1038 / npp.2015.331 ။